SONATA-CANTATA: ဖိနပ်လေး တစ်ရံ (တဂ်ပို့စ်)
ဘ၀ရဲ့ အတွေ့အကြုံလေးနဲ့အတူ ဖိနပ်လေးတစ်ရံ တဂ်ပို့စ်လေး ဖတ်သွားတယ် သန္တာရေ...
တိုးတိုးပြောသွားတဲ့ စာလုံးသေးလေးတွေကို မျက်မှန်တပ်ပြီး အတင်းဖတ်သွားရသေးတယ် ။ ဖိနပ်အော်ဒါ မှာဦးမှ :P
မ ရေ. ဘဝတူတွေပေါ့နော်. အာအိုင်တီတုန်းက မ့ ကို အဲလိုပြောတဲ့သူက တကယ်တန်း သူခြေဆုံးခေါင်းဆုံးကြည့်မိပါတယ်ဆိုတာ ဝန်ခံနေသလိုပဲ. သူတို့ အပြောလွတ်ဖို့ ခပ်ရှားရှားပါ. (ရှူး. ဆရာမကြားစေနဲ့ နော်). နာမည်တူစိတ်ထားကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်းလေးရတာ ကံကောင်းတာပေါ့ မ ရေ. ခုလို စာတွေပြန်ရေးပါနော်
အမှတ်တရလေးများ (သို့မဟုတ်) လွမ်းရတဲ့ အဖြစ်ကလေးတွေ ပေါ့...း-)